Mofon’aina – TALATA 30 JANOARY 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 30 JANOARY 2018
30 janoary 2018
1 Mialà, ka mipetraha amin’ ny vovoka, ry Babylona, zanakavavy virijina! Mipetraha eo amin’ ny tany, fa tsy amin’ ny seza fiandrianana, ry Kaldea zanakavavy! Fa tsy hatao hoe vehivavy malemilemy sy mihantahanta intsony ianao.2 Alao ny vato fikosoham-bary, ka kosohy ny koba; esory ny fisalobonanao, akaro ny moron-tongotr’ akanjonao; aoka hiseho ny fenao, ka miroboha mita ny ony.3 Hiseho ny fitanjahanao, eny, ho hita ny fahamenaranao; hitondra famaliana Aho ka tsy hiantra olona.4 Ny anaran’ ny Mpanavotra anay dia Jehovah, Tompon’ ny maro, Iray Masin’ ny Isiraely.5 Mipetraha mangingina, ka midìra ao amin’ ny maizina, ry Kaldea zanakavavy! Fa tsy hatao hoe Tompovavin’ ny fanjakana intsony ianao.
ISAIA 47 :1-5
ANDRIAMANITRA NO TOMPON’NY FAHEFANA REHETRA
Nihambo hanana fahefana maharitra mandrakizay Babylona ka nihevitra fa tsy hisy afaka hanaisotra izany (jereo and 7).
1-Afaka manaisotra ny fahefan’olombelona Izy
Nanao tsinotsinona an’i Jehovah Andriamanitr’Israely i Babylona tamin’ny nadravany tempoly tao Jerosalema. Noheveriny fa ny faharavan’i Jerosalema sy ny fahababoan’ny vahoakan’Israely dia fahafoanan’ny fahefan’i Jehovah sy ny heriny. Nitokiany fatratra ireo sampiny. Ambaran’ny mpaminany ny handravana ny fahefany sy ny hampitanjahana azy amin-kenatra lehibe (and 3,5). Fahefana avy amin’ Andriamanitra samirery ny mametraka sy manaisotra ny olona amin’ny toeran’ny mpitondra sy mpanapaka. Fampitandremana ho an’izay rehetra mihevitra azy ho manam-pahefana izany mba hanaovany tsara ny asany amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra.
2-Izy no manafaka ny vahoakany
Jehovah no mpanavotra ny olony. Mampahatezitra an’i Jehovah ny fampijaliana atao amin’ny vahoakany, ary izao dia hanao valifaty tokoa Izy. « Hitondra famaliana Aho ka tsy hiantra olona » (and 3 d). Tsy mahafoy ny olony izay mitaraina sy miverina Aminy Izy ka mamonjy azy amin’ny tànan’ny fahavalo . Tsy sitrak’ Andriamanitra ny fanompoan-tsampy. Hofaiziny sy hesoriny amin’ny fahefany izay mirehareha sy mihevitra Azy ho tsy misy ka mampijaly ny vahoaka voafidiny .
Inona no andraikitry ny fiangonana manoloana ny fampahantrana sy fampijaliana mahazo ny vahoaka ?
Mofon'aina - ALAROBIA 31…